Indlela yokunciphisa i-hemorrhoids-Iingcebiso zezeMpilo kumadoda aneSitayile | Amadoda aQinisekileyo
Iihemorrhoids okanye zikwabizwa ngokuba ziimfumba ngala maqhuqhuvana okanye amaqhuma ezibonakala ngathi zidumbile kufutshane ne-anus, ukuze zikhuthaze iintlungu kunye nokurhawuzelela. Ngamaxesha amaninzi oku kudumba kunokubangela ukopha kwaye oku kucaphuka kunokubangelwa bubukho bezitulo ezinzima okanye yikhemistri yokutya okuthile.
Phantse iipesenti ezingama-75 zabantu baye bafumana ama-hemorrhoids ngexesha elithile ebomini babo. Kwiimeko ezininzi zenzeka okwexeshana nakwezinye iimeko ukungonwabi kunokuba mandundu iintsuku nangamaxesha awahlukeneyo enyakeni. Kukho izinto zokuthambisa kunye nezonyango lokuqala, kodwa kukwakho amayeza asekhaya esinokuwasebenzisa ekhaya.
1 Ungazikhulula njani kwi-hemorrhoids nge-cream ezithengiweyo kunye nonyango
2 Unyango lwasekhaya lokunciphisa hemorrhoids
2.1 Coca indawo leyo kakuhle emva kwentshukumo nganye yamathumbu
2.2 Iibhafu zeSitz
2.3 I-Aloe vera kunye neoyile ye-olive
2.4 Ukubandezeleka komkhenkce nokubanda
3 Xa kufuneka ubonane nogqirha
Ungazikhulula njani kwi-hemorrhoids nge-cream ezithengiweyo kunye nonyango
Ezi ntlobo zeekhrim ziyafumaneka kwikhawuntara phantse kuzo zonke iikhemesti. Ifomathi yayo ingaboniswa ngohlobo lweekhrim, ioyile yokuthambisa, iipads, okanye iifosisi. Zonke ziyanciphisa ukudumba kwaye zibonelela ngoncedo olukhawulezileyo. Ziqulathe izithako ezifana i-lidocaine, i-hydrocortisone, kunye ne-hazel yegqwirha ukuphelisa iintlungu, ukurhawuzelela kunye ukurhawuzelela. I-Hydrocortisone ayikhuthazwa ukuba isetyenziswe ngaphezulu kweveki, kuba inokutshintsha ubukhulu besikhumba.
Ukuba iintlungu azinyamezeleki ungazisebenzisa Ukuphelisa iintlungu zomlomo njenge-acetaminophen, ibuprofen, okanye i-aspirin. Phakathi kwemisebenzi yayo iya kuba kukunciphisa ukudumba, iintlungu kunye nokunciphisa ukungonwabi. Nantsi lapho ukuzisula okuzisolayo Zingasetyenziselwa ukucoca emva kokuba unentshukumo yamathumbu. Phakathi kweepropathi zayo iqulethe i-hazel kunye ne-aloe vera yokuphumla kuloo ndawo.
Unyango lwasekhaya lokunciphisa hemorrhoids
Isicwangciso esiliqili ekufuneka siphumeze ngaso kuphephe ukuqhina. Ngenxa yoku kufuneka sitshintshe ukutya kwethu, ukuphelisa ukutya okumnandi Njengekofu, theine, iziqholo ezomeleleyo, iziqholo notywala. Kuyacetyiswa kakhulu ukutya okuphezulu kwefibre kwaye siyifumana kwiinkozo, imifuno kunye neziqhamo. Xa sisebenzisa ifayibha sinceda isitulo ukuba sithambe ngakumbi ukuze siphephe ukuxhathisa xa sizithuma kwaye sisenza mandundu ngakumbi.
Coca indawo leyo kakuhle emva kwentshukumo nganye yamathumbu
Lo mkhuba unokuba ngowona ufanele ukulungelelaniswa, kuba ukucoca kakuhle emva kokufuduka izakunceda unyango olukhawulezileyo. Emva kokuya kwigumbi lokuhlambela kubalulekile ukwenza Sebenzisa isepha kunye namanzi ashushu ukucoca indawo. Ukusetyenziswa kweesuli nako kunokuba yinto elungileyo, kodwa okoko zingenazo iziqholo okanye utywala obunokucaphukisa.
Iibhafu zeSitz zisebenza ngokumangalisayo, njengoko zinceda ukunciphisa ukudumba kwehemorrhoids ngokwendalo. Unga lungiselela ukumiliselwa okukhethekileyo unyango kwaye ubongeze emanzini. Uya kusebenzisa ibhafu encinci okanye isitya esincinci esilingana ne-bidet apho uya kuhlala khona. Ukufakwa ngaphakathi kugalelwa ebhafini okanye kwisitya kwaye kufuneka sinxibelelane nehemorrhoids ezihlamba Imizuzu eli-10 ukuya kweli-15 kanye ngemini.
Imifuno esebenzayo kakhulu umdiliya, i-chestnut yehashe, i-hazel yegqwirha kunye nomtshayelo wesilarha. Unokuthatha la machiza ukuya kuthi ga kathathu ngemini njengokufakwa. Iityuwa ze-Epsom bakwalunyango olulungileyo. Yongeza iityiwa esihlalweni sakho okanye ebhafini kwaye uhlale imizuzu engama-20 de ube uziva uxolile.
Iibhafu zeSitz ngamanzi ashushu kunye nesepha ngoluhlobo, zikwasusa ihemorrhoids. Unokwenza amaxesha angama-3-4 ngosuku ngemizuzu eyi-10-15 kwiseshoni nganye.
I-Aloe vera kunye neoyile ye-olive
Isityalo se-aloe vera sinikiwe iipropathi eziluncedo kakhulu kwiimeko zolusu. Ineziphumo ezichasene nokuvuvukala ezinceda ukunciphisa ukucaphuka kwaye la macandelo anokunceda kakhulu unyango hemorrhoid.
Ukuze uyisebenzise, ​​kuya kufuneka ukhuphe ijeli emsulwa evela ngaphakathi kumagqabi yesityalo kwaye usisebenzise kwindawo leyo. Kuya kufuneka ulumkele eli khompawundi kuba kukho abantu abaphikisana nesi sityalo. Ukwenza oku, yenza uvavanyo kwangaphambili ngokusebenzisa inani elincinci leeyure ezingama-24 ngaphambili engalweni kwaye ulinde de kungabikho mpendulo.
I-oyile ye-Olive nayo ineziphumo ezichasayo. Inokukunceda ukufudusa ii-hemorrhoids eziphume ngaphandle kwe-anus, uthambise ngomnwe wakho ngeoyile kwaye ubazise ngaphakathi.
Ukubandezeleka komkhenkce nokubanda
Ukuba le ndawo idumbile kwaye ibuhlungu, kunokuba njalo thambisa umkhenkce ukuthambisa eli qhuma. Songela umkhenkce ngelaphu uze uwubeke kwindawo kangangemizuzu eli-15. Ingqele ebandayo iya kunceda ukunciphisa ukudumba kunye iya kuba nefuthe le-anesthetic. Ukucinezelwa kwamanzi abandayo okubekwe kule ndawo kuya kunceda ukunciphisa oku kungahambi kakuhle.
Xa kufuneka ubonane nogqirha
Iimpawu zihlala kulula ukunyanga kwaye zezokwexeshana. Amatyala apho ukusebenza kwawo kunokuba nzima kunqabile, kodwa kunokubangela iingxaki. Xa unyango lungasebenzi kwaye iintlungu ziqhubeka kakhulu okanye igazi elininzi lilahlekile, kunyanzelekile thetha nogqirha. Kwezinye zezi meko, kuye kwafuneka sebenzisa i-thrombectomy, kunye nokususwa kotyando kwe-hemorrhoids okanye ukusetyenziswa kwe-ligation ngeebhendi zerabha, ukuphazamisa ukunikezelwa kwegazi kwi-hemorrhoid.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Indlela yokunciphisa i-hemorrhoids